Taiza no niandohan'ny Tour de France voalohany? - Tour De France
Tena > Tour De France > Ny tour de france dia nanomboka tany ivelan'i france voalohany tao amin'ny tanàna iza? - vahaolana maharitra
Ny tour de france dia nanomboka tany ivelan'i france voalohany tao amin'ny tanàna iza? - vahaolana maharitra
Taiza no niandohan'ny Tour de France voalohany?
(mozika mangina) - Fantatro fa ity dia handeha mafy tokoa. Saingy mbola nataoko ambanin-javatra ihany izany. Mahery be izy io.
Iray amin'ireo zavatra mahatsikaiky indrindra nataoko tamin'ny kodiarana roa. - Io, tsy isalasalana, no zavatra adaladala indrindra nataoko. 60 km / ora amin'ny moto 100 taona.
Misy zavatra mitranga. (mozika miala sasatra) - Ny Tour de France tany am-boalohany dia 1903 ary hazakazaka tena hafa tanteraka tamin'izany fotoana izany, dingana enina fotsiny fa tsy ilay 21 ananantsika ankehitriny, saingy tena epic izy ireo. Ny dingana voalohany irery dia nitarika avy tany Paris ka hatrany Lyon, 467 km.
Roa avo roa heny izany raha oharina amin'ny dingana lava indrindra amin'ny fitsidihana 2019. Raha vao jerena, ny fitsangatsanganana voalohany dia mety tsy dia misy ifandraisany amin'ny hazakazaka maoderina noho ny amin'ny tontoloko, fiaretana ultra. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe, nanao ahoana ny fahasarotany tamin'ny voalohany? Inona no mampitaha azy amin'ny bisikileta erak'izao tontolo izao? Ary ahoana? azo ampitahaina amin'ny matihanina maoderina ve izy io? Iray ihany ny fomba hahitana izany. (Milalao akordeon) - Io no nanombohana azy rehetra fe au Reveil Matin, 116 taona lasa izay, ary ho hitako ny hasarotan'ny fitsidihana rehefa nanomboka izy - Ah Mark! Notadiaviko foana - - Te handeha irery aho, izany no hevitra, iza io lehilahy io? - Manao ahoana ianao? - Salama - Te hanana fiaretana fiaretana ultra foana aho - Okay.
Ary mahay mitondra fiara an-kilaometatra maro ve ianao? - Tsia. - Tsara, aleo isika manomboka amin'izay. Andao! - Andao! (Mozika violon) Somary fohy kokoa noho ianao aho, somary blond ihany koa aho, ho Maurice Garin aho, mazava ho azy ny mpandresy, mifanaraka amiko tsara - Ho nandresy i Maurice Garin, ny anarany no fotsy kely famafazana ny vavahady.
Satria io no asanao anio. Na talohan'ny nanombohanao nandeha bisikileta.-Eny, tsy misy mety ho mavesatra toa ny famonoana ny setroka.-Ary toa 60 kilao ianao, marina? (Mihomehy i Marka) - Omeo na raiso. - Eny ary, nisy tovolahy roa tonga teo amin'ny faran'ny sehatra tao anaty vondrona fialantsasatra ary ny iray hafa dia mpankafy, zazalahy iray feno Emile Pagie, ary tsy nampoiziny na inona na inona mihitsy.
Saingy nijanona niaraka tamin'i Garin izy, ary raha te hitoetra ho marina amin'ny tantara dia tsy maintsy miaraka any isika. Ho vitantsika ve izany - tsy fantatro, tsy fantatro. Ie, hiezaka ny handresy aho, fa amin'ity tantara ity, tsy fantatro raha marina izany. (mozika mangina) - Tamin'ny taona 1903 dia nanomboka tamin'ny 16 minitra lasa tamin'ny 3 izy ireo dia nahemotra ny fanombohana satria nitaraina ny mpamily momba ny lalan'ny sarety sy ny làlana mahatsiravina ho an'ny hazo kypreso 500m, ka 16 minitra lasa 3 - Ary lasa izahay. - Matahotra ve ianao? - Matahotra aho, tsy hevitra izany izao, tena zava-misy.
Vonona ve ianao? - Ity no iray amin'ireo mitaingina mahatsikaiky indrindra nataoko. - Zahao ity bisikileta ity! Andao hatao. (Mihomehy i Mark) Andao hofaranana! (Hira mahafinaritra) - Ka izany no hafainganam-pandehan'izy ireo araka ny noheveriny tamin'ny lesona voalohany.
Ary izany dia amin'ny tarazo lavorary, azonao sary an-tsaina izany amin'ny loto? Manana an'io fifamoivoizana io izahay mamela an'i Paris ao aoriantsika ary tsara tarehy eto. Soa ihany fa manana tailwind kely miaraka amintsika isika, saingy somary zatra mizatra kely ireto bisikileta ireto. (Milalao accordion) - Ka izao no mitranga rehefa mitaingina bisikileta 100 taona ianao.
mpihanika tendrombohitra plank
Ny bearings koa dia efa antitra ka toa ny bracket ambany dia karazana tratra ka somary sarotra ny mandeha pedal. Manaraka indrindra an'Andriamatoa Mark Beaumont. (mozika mainty) Ity ny bisikiletako nesorina tao amin'ny tranombakoka omaly.
Izy io dia frame '56, ary fantatro izany satria eo amin'ny frame. Eto izahay dia manana paompy izay mbola tsy nanandramako, manana lasely hoditra izay karazana voarindrina vy vy roa izahay, tsy mahazo aina izany. Ny paosin-tànana vita tanana sasany dia natao tamin'ity toeran'ny hazakaza-tsoavaly ity, noho izany dia toerana mahery setra tokoa izy raha mitaingina 467km.
Ary eo alohany misy rake lehibe eo amboniny.- Eny, ity no fiarandalako azo itokisana, manana ny fahatsapana aho fa tsy maintsy mikasika ny satroko rehefa miteny izany aho. Amin'ny hazakazaka maitso britanika izy, izay ekeko, na dia tsy nisy anglisy aza tamin'ny fitsidihana 1903.
Tena sarotra izany. Mahatsiaro ho bisikileta paositra WWII io fa tsy bisikileta hazakazaka izay tsy haiko akory ny fandikan-teny, ny isa manakaiky angamba dia manodidina ny 45, 46, 18 heveriko. Ary eny, nikororosy nidina havoana tamina fiara fitiliana haingana aho ary nilatsaka ny paompy, niankohoka tamin'ny tongotro io rehefa nandeha tongotra aho.
Ilay lasely, eny. Mahagaga, tsara tarehy. Miaraka amin'ny baoritra hazo.
Ny tiako holazaina dia zavatra tsara tarehy. (mozika gitara malefaka) - Tena henjana tokoa, ny 30km / ora, saingy tsy mahazo aina ity lasely ity - Ka mihoatra ny 10% amin'ny lalana mankany Lyon isika - 10%? - 10% .- Firy kilometatra izany? - Tombanako mandritra ny 3 na 4 ora hafa dia handeha hiova alina izahay.
Ahoana no fomba hiainana mifanaraka amin'ny andrasana? - Izay no ampahany mampatahotra indrindra - Amin'izao fotoana izao, - Ny nataoko izay efa nataoko. - Adinoy izay eo alohanao, ankehitriny dia tsy maninona ianao? - Fa tiako ilay izy, eny. - Mety ve ny fononteny ambany? - Mihatsara ny fononteny ambany, manomboka zatra an'io toerana mahatsiravina io ny soroko. - Heveriko fa rehefa tonga teo aho dia liana tamin'ny zavatra nataon'ireto tovolahy ireto tamin'ny 1903 Tsy dia nieritreritra firy momba ny mitondra fiara aho, toy ny hoe 'tsara, milay ny manaraka ny dian'izy ireo , ary amin'ny fomba ahoana 'hahatakatra tsara kokoa ny tantaran'izy ireo'
Oviana no Tour de France voalohany?
nyvoalohany Tour de Francedia natsangana tamin'ny 1903. Ny drafitra dia hazakazaka 5-dingana ny 31 Mey ka hatramin'ny 5 Jolay,manombokaany Paris ary mijanona ao Lyon, Marseille, Bordeaux, ary Nantes alohan'ny hiverenany any Paris. Nampidirina Toulouse taty aoriana mba hamaky ny halavirana lava miampita atsimoFrantsahatrany Mediterane ka hatrany Atlantika.
Firenena aiza no manomboka ny Tour de France?
Tour de France 1903/Daty fanombohana
Raha tsorina, ny Tour de France no hetsika bisikileta lehibe indrindra amin'ny vanim-potoana, natao tamin'ny volana Jolay. Ao amin'ny Tour, ny mpitaingina tsara indrindra eran'izao tontolo izao dia mifaninana amina dingana 21 manerana an'i Frantsa ho an'ny vidiny farany amin'ny bisikileta, telo herinandro amin'ny fandresena samy hafa mpandresy isan'andro ary akanjo marobe miloko maro no sarotra harahina, noho izany dia hofongarantsika ao amin'ny bokin'ity mpanafika Tour de Frost ity dia inona ny fitsidihana? Ny Tour de France dia iray amin'ireo fitsidihana bisikileta telo tsara ary? ny hazakazaka malaza lehibe indrindra amin'ny kalandrie tsy misy fanontaniana satria mpamatsy vola ny Tour de france dia misy dingana 21 miparitaka mandritra ny telo herinandro izao dia omena ny dingana tsirairay, ny mpitarika ny hazakazaka ary ny mpandresy amin'ny ankapobeny dia tapa-kevitra fa ny fotoana mihodinkodina rehetra dia izao no resahina ao ankoatry ny laharana ankapobeny amin'ny fanasokajiana ankapobeny na ny gcas dia matetika no antsoina hoe izy no voalohany niampita ny tsipika fahatongavana isaky ny dingana nomena satroboninahitra mpandresy tamin'ny sehatra. Matetika ny fitsangatsanganana dia misy andro fitsaharana roa tsy misy hazakaza-tsoavaly, na dia mivoaka sy manao andilan-tongotra aza ireo mpitaingina mitazona ny tongony, saingy maka andro tsy fiasana izy ireo mba hahazoana antoka fa manana fitsaharana ireo mpamily, ka afaka mihazakazaka mafy araka izay tratra ianao ny andro ho avy hahatonga ny hazakazaka mahaliana araka izay tratra.
Ny fitsangatsanganana dia nanomboka hatramin'ny 1903 niaraka tamin'ny fanelingelenana tokana tamin'ny Ady Lehibe I sy II, nahatonga ny hazakazaan'ny taona 107 natomboka tany amin'ny firenena mifanila toa an'i Belzika, Netherlands, Great Britain ary amin'ny toerana hafa, ankehitriny ny dingana voalohany amin'ny hazakazaka dia matetika no atao ao io firenena io, saingy avy eo dia niainga ho any Frantsa izy ireo ho an'ny fiandohana fantatra amin'ny anarana hoe Grand Departall, noho izany ny fizotran'ny Tour de France dia tafiditra ao anatin'ny sokajy dimy samihafa sokajy voalohany dingana voalohany ireo dingana ireo dia mazàna manana fironana kely ary ampiasaina mba hifaninanana afindra ny tandavan-tendrombohitra manerana ny tanànan'ny frantsay, ankehitriny izy ireo dia matetika no resin'ny manam-pahaizana antsoina hoe sprinters, izay mahatratra ny hafainganam-pandeha mihoatra ny 70 kilometatra isan'ora, rehefa mihazakazaka mankany amin'ny tsipika fahatongavana any amin'ny toerana tena haingana izy ireo, avy eo manana ny dingana be tendrombohitra isika , ankehitriny ny dingana an-tendrombohitra amin'ny fitsangatsanganana no zava-dehibe sy ampahany amin'ny hazakazaka, izay ahitan'ny tsirairay ny maha-mpijery sy ny mpanafika azy ireo dia miparitaka eo anelanelan'ny Alpes frantsay sy ny pyrenees ary ireo dingana ireo dia mitaingina an'arivony metatra fiakarana mandritra ny telo herinandro dia azonao atao ny miafara amin'ny tampon'ny tendrombohitra goavambe rehefa tonga ny tampon'isa na indraindray rehefa avy nidina tady lava taorian'ny fiakarana tsara ireo dingana ireo dia nampientanentana foana ary matetika izy ireo no mpanapa-kevitra lehibe. amin'ny fitsapana amin'ny fotoana ankapobeny raha te handresy ny tourde france ianao dia tokony ho tsara ny fotoana fitsapana dia antsoina hoe mihazakazaka amin'ny famantaranandro, satria ezaka iray isaky ny vanim-potoana izay ahafahan'ny mpamily rehetra mandalo fotoana fohy minitra iray isaky ny mandeha. , ny mpitaingina mazàna dia mampiasa bisikileta aerodynamika sy fitaovana manokana mba handeha haingana araka izay tratra arak'izay vitany. Ny fitsapana ny fotoana dia mety hitranga amin'ny faritra rehetra, manomboka amin'ny làlam-be mankany amin'ny faritra be havoana ary na ny fiakarana an-tampon'ny havoana aza dia manome fotoana lehibe ho an'ny filaharana amin'ny ankapobeny handany fotoana be dia be amin'ireo mpifaninana. Ny fisedrana ny fotoana ekipa dia atao amin'ny endrika mitovy amin'ny fisedrana fotoana tsirairay, fa ny ekipa iray manontolo kosa dia mihazakazaka ary mitondra amina fananganana baseline, alao sary an-tsaina ny vorona mifindra amin'ity endrika lehibe V ity, manampy amin'ny famakiana ny rivotra sy mitazona izany izy ireo. ny hafainganam-pandeha avo dia avo toy ny ekipazy amin'ny tsipika faran'izay haingana araka izay tratra.
Ankehitriny ny ekipa iray manontolo dia manomboka miaraka ary ny fotoana farany omena dia ny mpitaingin-tsoavaly fahadimy hiampita ny tsipika fahatongavana, saingy matetika dia manomboka amin'ny mpitaingina valo izy ireo. Ka rehefa manana mpamily valo mihena telo dia dimy izy ireo, ka mazàna manana mpamily telo manao izay azony atao. Izahay matetika dia mamadika an'i Calla ary mandoro tsara, handeha lalina izy ireo raha toa ka miala eo akaikin'ny tsipika fahatongavana, avelany handeha ny ekipa sisa tsy misy azy ireo, ireo mpitaingin-tsoavaly ireo matetika dia mihodina amin'ny hafainganam-pandehan'izy ireo hahafoy ny ekipany mpitarika, izao ny andrana ekipa, raha vita tsara, dia toa milina misy menaka tsara manana tombony lehibe kokoa noho ny cadres hafa, miady amin'ity karazana hetsika ity, ny mpandresy amin'ny Tour de France dia mpitaingin-tsoavaly iray miaraka amin'ny fotoana feno farany ambany indrindra tamin'ny faran'ny dingana faha-21, izay nifarana teo amin'ny Champans-Elysees malaza any Paris nanomboka tamin'ny taona 1975, ny vondrona mpitaingin-tsoavaly marobe dia ao amin'ny The tour fantatra amin'ny anarana hoe Peloton thepelotonis dia ahitana ekipa 22 misy mpamily valo, izay samy miteraka 176. mpamily amin'ny voalohany.
Ny ekipa tsirairay dia voaforona mpitaingin-tsoavaly tsara indrindra mandrafitra an'izay iza amin'ireo superstar bisikileta isan-taona. Ekipa ambaratonga faharoa mpomba ny kaontinanta manana karatra bibidia ary heverina ho kely kokoa izy ireo, na dia manana ekipa mpomba ny kaontinanta aza ireo ekipa superbig hanehoana ny mpanohana azy amin'ny hazakazaka lehibe indrindra amin'ny vanim-potoana, hifaninana amin'ny Bigworld Tour ekipa ary mety hisarika ny scout talenta izay mitady hanao sonia azy ireo amin'ny fitsidihana izao tontolo izao amin'ny vanim-potoana ho avy ny mpamily mpanaraka kaontinanta dia manome lanja ny hazakazaka am-pitetezana mba hanomezana fiheverana bebe kokoa ireo mpanohana azy, araka izay tratra, ankehitriny dia mazàna ireo ekipa mifantoka manodidina ny mpamily iray na roa voatondro ho ekipa mpitarika ny ekipa izay mikendry ny handresy dingana tsirairay na kandida fanasokajiana ankapobeny izay ny tanjony dia ny handresy ny Tour de France, iray manontolo, ary koa ny mpitarika sisa amin'ny s. ekipa dia misy tokantrano, izay midika ara-bakiteny ho an'ny mpanompo ao an-trano ankehitriny mba hanohana mivantana ireo mpitarika ny ekipany, manao sorona ny fahafahany mitarika ary manampy ny ekipa hahatratra an'ity Matetika ny olona toredomestiq no mitaingina ny lohan'ny vondrona hampihena ny fiakaran'ny fanafihana hampihena ny mpitondra amin'ny rivotra, mba hitehirizana tanteraka ny tahirin'ny angovo an'ny mpitarika. Ny olona eo an-toerana dia miverina any amin'ny fiaran'ny ekipa ihany koa mba hanangona sakafo, handray baiko, haka tavoahangy akanjo ho an'ny mpitondra azy ireo, raha tokony hanana izany aza ny mpitarika azy ireo dia namono kodiarana teo amoron-dàlana izay tsy ahatongavan'ny fiaranay, manome ara-bakiteny bisikileta na bisikiletan'izy ireo mba hamerenany azy ireo hazakazaka haingana araka izay azo atao izao raha toa ka mpandresy iray monja ny dingana tsirairay ary ny Tour dia nahazo mpamily iray fotsiny ireo fandresena ireo dia vokatry ny fiarahan'ny ekipa valo mpiara-miasa tsy misy kilema sy tsotra fotsiny apetraka, tsy misy afaka mandresy irery ny fitsidihana de france fa tsy azo atao ny ohabolana taloha ny fiaraha-miasa mahatonga ny nofy ho vanona ny fitsidihana dia kaleidoscope miloko tsara tarehy mamakivaky an'i Frantsa ity fifangaroan'ny jerseys tanora vita amin'ny logo mpanohana mamirapiratra ity Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18870730 '' amin'ny iray amin'ireo fanasokajiana efatra samy hafa Ny akanjo mavomavo Le Mayo Jean no akanjo lehibe sy manja indrindra an'ny mpitaingina Tour de France miaraka amin'ny fotoana ambany indrindra amin'ny làlana hatreto, mavomavo ilay akanjo, noho ny gazety frantsay Auto, izay nampiroborobo ny hazakazaka tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20, vita tamin'ny taratasy mavo miavaka vita pirinty ankehitriny izay manao an'ity akanjo ity amin'ny faran'ny dingana 21, ny Tour de France dia mahazo fanajana mandritra ny androm-piainan'ny mitovy taona sy ny mpankafy ary miaraka amin'ny vola 500.000 euro ny fotsy. le mile block jersey ny akanjo lava fotsy dia manondro ny mpamily tanora mahay indrindra amin'ny hazakazaka ity no mpamily napetraka tsara indrindra amin'ny laharana ankapobeny eo ambanin'ny 25.
Janoary voalohany amin'ny taom-pilalaovana tsirairay 'azo atao mba hitazomana ny akanjo mavomavo amin'ny fotoana mitovy amin'ny akanjo fotsy fotsy amin'ity tranga ity dia ny laharam-pahamendrehana mavo izao no laharam-pahamehana ary ny toerana faharoa an'ny mpamily tanora amin'ny laharana ankapobeny dia mitafy ny akanjo fotsy amin'ny faran'ny fitsidihana ny mpamily tanora tsara indrindra dia maka 20.000 euro. Ny lobaka maintso antsoina hoe Lumaio ver no akanjon'ny sprinter mandritra ny hazakazaka iray manontolo dia nomena loka ho an'ny mpitaingina voalohany niampita ny tsipika fahatongavana Ny isa azo dia omena isan'andro, fa ny isa azo alaina dia miovaova arakaraka ny andro. sehatra ankoatr'ireto teboka ireto, ny lalan'ny isan'andro dia tototry ny antsoina hoe sprinter antenantenany alohan'ny tsipika fahatongavana Ka mahaliana hatrany ireo hazakazaka. Ny isa sprint start-finish dia omena isa na amin'ny sprint intermière na amin'ny sprint farany ary ny mpamily manana isa betsaka indrindra amin'ny faran'ny hazakaza-mitafy ny akanjo lava maitso, ankehitriny ity jersey ity dia mazàna na anaovan'ny sprinter izay manangona isa rehefa mandresy dingana izy ary mifarana matetika amin'ny top 15 amin'ny dingana tsy resiny ary any an-tendrombohitra miady ho an'ny outliers dia azonao antoka ny sprinter antenantenany na dia amin'ny andro tsy anananao vintana fandresena aza ny vidin'ny jersey maitso dia dimy arivo sy roa alina euro, ny jersey la moi poirous dia mitobaka amin'ny fomba mitovy amin'ny naman'ny dingana anelanelany amin'ny tampon'ny isan'ny fiakarana lehibe rehetra hahatratraran'ireo mpitaingina voalohany ny tampony, ny isan'ny teboka misy dia miovaova arakaraka ny ny naoty ny fiakarana Ny fahasarotan'ny fiakarana no betsaka ny isa atolotra izao Ny mpamily miaraka amin'ny ankamaroan'ny teboka an-tendrombohitra dia miakanjo ilay akanjo lava tototra ary mody 25 000 euro amin'ny faran'ny fitsidihana. Andao hiresaka sprinters Sprinters mazàna mikendry ny handresy dingana fisaka miaro tena amin'ny rivotra ao ambadiky ny mpiara-miasa aminy tontolo andro manandrana mijanona eo akaikin'ny tampon'ny fisorohana olana hisorohana ny fisarahana amin'ny fizarana teknika hisorohana ny fiovan'ny rivotra mianjera amin'ny zavatra isan-karazany fa ny sprinters ara-bakiteny fa rehefa manenina izy ireo aza mikasika ny rivotra velively ary manaloka eo alohan'ny peloton hatrany hatrany amin'ny metatra farany metatra izy ireo, izay nialohan'izy ireo tao ambadiky ny mpiara-miasa aminy izay nanome azy ireo fitarihana lehibe handresena ny fandresena ka nihazakazaka nankany amin'ny tanjona izy ireo Tamin'ny fampisehoana tampony tanteraka , ny sprinter dia afaka mamokatra herinaratra betsaka na dia mandritra ny fotoana fohy aza ary haingana dia haingana izy ireo.
Ny maha-sprinter anao dia asa tsy manam-paharoa sy mampidi-doza io famaritana io ihany amin'ny faran'ny fitsidihan'ny sprinter tendenzie mandritra ny ora maro ao aorian'ny mpandresy amin'ny laharam-pahamehana, na dia mety nahazo dingana maromaro aza ianao nandritra ny fizotran'ny fizahan-tany dia azon'ny manampahaizana mihanika madio. ireo mpitaingin-tsoavaly ireo dia manao kariera amin'ny fiakarana ary manao mpihanika haingam-pandeha dia mpitaingin-tsoavaly mikendry ny handresy ny fitsangatsanganana ankapobeny Fa ny hazakazaka koa dia manana mpihanika izay tsy liana amin'ilay akanjo mavo. Tanjona madio ihany no azon'izy ireo handresena ny fahatongavan'ny tampon'isa sy ny dingana an-tendrombohitra. Ankehitriny ny mpitaingina te handresy ny fitsidihana iray manontolo dia tsy maintsy mahay mihanika tendrombohitra tsara, ary koa ny mety hiteraka banga marobe amin'ny ligy ary hahatonga ny mpifaninana aminy hamoy fotoana betsaka amin'ny filaharana ankapobeny ao anatin'ny iray Ny fitsapana ny fotoana isam-batan'olona dia manan-danja indrindra amin'ny hazakazaka an-tsehatra matetika hisy farafahakeliny indray mandeha isaky ny fanontana ny Tour de france, fa ny sasany kosa dia nampiana roa na maromaro mpitarika ny ekipa izay nahazo ny laharana ankapobeny tamin'ny fizahan-tany te handresy dia tsy maintsy mahay mamorona fotoam-pitsarana tsara, ny andrana matetika dia maharitra hatramin'ny 30 minitra ka hatramin'ny adiny iray, ary ny mpamily dia manana ny mety handresy minitra mialoha ny mpifaninana aminy raha toa ka tena mahay mandrafitra amin'ny fandresena amin'ny fandresena amin'ny Ny fanandramana fotoana dia hanana tombony lehibe kokoa amin'ny mpifaninana Agc izay tsy miankina amin'ny fiakarana haingana any an-tendrombohitra fotsiny mba hahazoana fotoana izao ankoatra ny fotoam-pitsarana manolotra bonus isan'andro ho an'ireo mpitaingina telo voalohany amin'ny The finish line mitazona ny enina sy efatra segondra ho an'ny laharana voalohany, faharoa ary fahatelo ny Vehivavy Tour de France Akaiky indrindra ny peloton vehivavy. Grand Tour maharitra telo herinandro no atao ao amin'ny Girorosa, hazakazaka an-tsehatra 10 andro izay manomboka amin'ny volana jolay ary koa ny orinasa mandamina ny fitsangatsanganana fizahan-tany ihany koa ny fizotran'ny hazakazaka iray andro fitsangatsanganana vehivavy iray satria efa notazonina tamin'ny làlana mitovy amin'ny hazakazaka ho an'ny lehilahy nandritra ny taona maro.
Ity dia làlana fisaka iray manodidina ny champ-elysees ao Paris izay notapahan'ny vondrona sprinters be dia be ny endrika bisikileta mandritra ny fotoana tsy voafetra ary ho dingana lehibe mankany amin'ny fanatanjahantena tena mitovy ary fantatro manokana fa zavatra tsy mampino izany. afaka mahita an'io ary ho velona indray ok manana ny hadisoako aho ahoana no fahitako an'ity toerana ankafizinay ity hahitako ireo mpizahatany amin'ny hazakazaka gcn mazava ho azy fa angamba mitongilana kely isika fa ankoatry ny fitsangatsanganana dia manana be dia be hafa isika hazakazaka mandritra ny taona, fa ny gcn kosa vaovao? Ny Race Pass dia manana ny zavatra rehetra mety tadiavinao, misy karazana endrika rehetra toy ny mombamomba ny sehatra, lisitra fanombohana, fanasongadinana isan'andro aorian'ny famakafakana hazakazaka sy zavatra tsara maro hafa, manana ny zavatra rehetra ilainao izy, na mpijery za-draharaha ianao na fanatanjahan-tena voalohany amin'ny hazakazaka bisikileta dia noho izany ny fizotran'ny Tour de francethe lehibe indrindra ny hetsika lehibe indrindra amin'ny taona manerantany amin'ny bisikileta dia fanombohana tsara ny fitsidihana raha mbola tsy nahita hazakazaka bisikileta ianao taloha raha tianao Ity lahatsoratra ity, omeo rivotra izahay ary raha fantatrao fa misy olona mandeha bisikileta amin'izao fotoana izao ary mety te hahafanta-doha amin'ny hazakazaka am-bisikileta sy ny fitsangatsanganana. Alefaso amin'izy ireo ity lahatsoratra ity mba hampientanentana azy ireo, misaotra nijery ary hahita anao amin'ny manaraka izahay
Ahoana no niandohan'ny Tour de France ary iza no nanangana azy?
Ny 1903Tour de France nony hazakazaka am-bisikileta voalohanyhametrakaary notohanan'ny gazety L'Auto, razamben'ny gazety ankehitriny 'L'? quipe. Ny hazakazakadia noforoninahampisondrotra ny fivezivezan'i L'Auto, aorian'ny fivezivezenynanombokamilatsaka amin'ny fifaninanana amin'ilay Le V? lo efa ela.
Mandra-pahoviana ny dingana Tour de France?
nyTour de Francenanomboka tany Brittany ny sabotsy 26 jona 2021, niaraka tamin'ny fanokafana 197.8 kilometatrasehatraavy any Brest ka hatrany Landerneau.1
sakafo maraina mampihena lanja
Inona ny fanatanjahantena nasionalin'i Frantsa?
Ny baolina kitra no manana ny mpilalao manana fahazoan-dàlana betsaka indrindra ary heverin'ny maro ho toy ny-pirenenalalao an'nyFrantsa. Na izany aza, ny bisikileta sy ny tenisy ihany koa dia antsoina hoe-pirenenalalao an'nyFrantsany sasany.dimy ambin'ny folo. 2007.
Nofoanana ve ny Tour de France 2020?
Ofisialy izany2020 Tour de FranceNahemotra
Tsy mahagaga ny vaovao, noho ny valanaretina coronavirus. Na izany aza, fotoana manan-tantara ho an'ny hazakazaka malaza izy io. Ny mpikarakara ny hazakazaka Amaury Sport Organisation dia nanambara ny talata teo fa2020 Tour de Francehahemotra.
Mbola eo ve ny Tour de France 2020?
Taorian'ny lahatenin'ny Filoham-pirenena ny alatsinainy hariva teo, izay nandrara ny hetsika lehibeFrantsahatramin'ny tapaky ny volana Jolay ho ampahany amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny COVID-19, ny mpikarakara nyTour de France, nifanarahana tamin'ny Union Cycliste Internationale (UCI), dia nanapa-kevitra ny hanemotra nyTour de Franceho
Inona no antsoina hoe vondrona mpitaingina lehibe?
Amin'ny hazakazaka bisikileta eny an-dalana, ny peloton (avy amin'ny teny frantsay, izay midika hoe 'platoon' tany am-boalohany) dia ilayvondrona lehibenafonosan'ny mpitaingina.mpitainginaao anatin'nyvondronamitsitsia angovo amin'nymitainginamanakaiky (mandrafitra na mivezivezy) amin'ny (indrindra ao ambadiky) hafampitaingina.
Oviana no natao ny Tour de France voalohany?
Ny Tour de France voalohany - ny hazakazaka bisikileta lehibe indrindra eran-tany - dia natao tamin'ny taona 1903. Noforonin'i Henri Desgrange, tonian-dahatsoratry ny L'Auto, sy i George Lefèvre, mpitati-baovao amin'ny rugby sy bisikileta, hanampy amin'ny fampahalalana sy fanatsarana ny fivezivezena an'ity gazety fanatanjahantena ity ny hetsika voalohany dia hazakazaka enina enina mirefy 2428km.
Iza no hazakazaka lava indrindra amin'ny Tour de France?
Ny hazakazaka lava indrindra amin'ny tantaran'ny Tour dia natao tamin'ny taona 1926, nahatratra 5745km ny halavany. Ny fandehanana goavambe toy izany dia nanjary zavatra taloha tamin'ny voalohan'ny taona 1930 rehefa nosokafana ho an'ny mpanao dokambarotra hafa ny Tour, nalefa mivantana tamin'ny radio ny fandrakofana, ary nandresy ilay hazakazaka enina taona nisesy ny mpitaingina frantsay.
Oviana ny andiany faha-100 amin'ny Tour de France?
Ny Tour de France, nankalaza ny andiany faha-100, dia feno fiaretana ary, eny, famitahana tamin'ny hazakazaka voalohany. Tamin'ny 1 Jolay 1903, nisy lehilahy 60 nandeha bisikileta ivelan'ny Café au Reveil Matin any amin'ny tanàna ambanivohitr'i Montgeron any Paris.